Fiatrehana ny Can 2022: tsy mbola fantatra ny mariky ny fanamian’ny Barea | NewsMada
Tsy milamina mihitsy ny mahakasika ny Barea de Madagascar, amin’izao fotoana izao. Tsy misy fandaharana maty paika na amin’ny fanomanantena na amin’ny kianja na amin’ny fanamiana hoentina miatrika ireo lalao.
Nivoaka tao amin’ny tambajotran-tserasera, omaly talata, fa ny marika “Macron” no nahazo ny fifanarahana amin’ny fanamiana hoentin’ny Barea de Madagascar miatrika ireo fihaonana miandry azy, amin’ity taona 2021 ity. Nanambara kosa ny avy ao amin’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF), fa tsy mbola misy nahazo izany hatreto fa vao eo am-panaovana ny tombany sy fijerena ireo masontsivana rehetra ny kaomisiona misahana izany. Ampahafantarin’izy ireo amin’ny fomba ofisialy izany rehefa tontosa ny zava-drehetra. Tsiahivina fa efa tapitra tamin’ny 27 avrily 2020 ny fiarahana tamin’ny marika Garman, izay nisaloran’ny Barea de Madagascar, tany amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika (Can 2019), notanterahina tany Egypta.
Taorian’izay, nisy ny fanaovana tolo-bidy iraisam-pirenena, ny 7 febroary 2020 ny amin’izay hampiakanjo ny Barea de Madagascar ka marika telo no nifaninana dia ny Cercle by Ted, ny Macron ary ny Errea. Taorian’ny safidy sy ny tombana, lany ny Cercle by Ted, saingy tsy neken’ny rehetra izany. Anisan’ireo nitsipaka io marika io i Abel Anicet, kapitenin’ny Barea de Madagascar. Teo koa i Nicolas Dupuis, mpanazatra ny ekipam-pirenena malagasy. Nanakiana mafy io marika io ry zareo, noho izy tsy malaza eran-tany, raha sehatra eo amin’ny fanatanjahantena.
Tsy maintsy ho fantatra mialoha ny lalao hikatrohana amin’i Etiopia, ny 27 marsa ho avy izao izay marika hoentin’ny Barea de Madagascar.